Shirkii Melbourne Oo Si Heer Sare ah U dhacay - Cakaara News
Shirkii Melbourne Oo Si Heer Sare ah U dhacay
Melbourne (Cakaaranews ) isniin, 13ka june 2016. Waxaa maanta magaalada Melbourne ee wadanka Australia kadhacay shir ay si heer sare ah usoo agaasimeen jaaliyada DDSI ee wadanka Australia kunool.
Shirkan oo uu hogaaminayay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ay weheliyaan maareeyaha guud ee wakaalada hawlaha biyaha DDSI mudane Subeer Cabdi Axmed iyo gudoomiyaha jaaliyada DDSI ee waqooyiga America mudane Maxamed Shukri Nuur ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas’uuliyiinta jaaliyada DDSI ee wadanka Australia, heerarka kaladuwan ee xubnaha jaaliyada oo hoolka shirarka buux dhaafiyaya iyo marti sharaf kale.
Hadaba, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo furitaankii shirka kahadlay ayaa ugu horayn kawarbixiyay waxqabadyada iyo qorshayaasha horumarineed ee xukuumada deegaanka iyo ta dalkaba isagoo kusoo bandhigay maqal iyo muuqaalba guulaha waa wayn ee uu XDSHSI kakeenay dhinacyada horumarka, nabadgelyada iyo maamulka suuban. Wuxuuna madaxwaynuhu intaa kudaray inay jaaliyadu markhaati katahay jabkii qabsaday xubnihii tirada yaraa ee UBBO ee uu federal booliska wadanka australia indhaha ushiday kadib iskuday daciif ah oo ay rabeen inay kucarqaladeeyaan shirka iyadoo taasina noqotay maalin riyood ay kumutaysteen xabsi, garaac iyo maxkamad intaba.
Kadib hadalo muhiim ah oo ay soo jeediyeen kaqaybgalayaashu ayaa waxaa si farxad iyo guuli kudheehan tahay loogu wada damaashaaday hoolkii shirku kasocday iyadoo heesihii halganka deegaanka lagu galay, kuwii dhaqanka ee dhaantooyinka ahaa iyo murtida uu hibada iyo hal abuurka gaarka ah uleeyahay deegaanku lagu wada kifaaxay.
Ugudanbayna, shirkan ayaa wuxuu kusoo gabagaboobay jawi aad u wanaagsan oo ay farxad iyo guuli kudheehan tahay. wuxuuna hoolkii Melbourne maanta u ekaa hoolkii shirarka ee kaali ee kuyaala xarunta madaxtooyada DDSI.